काठमान्डौ आउदै हुनुहुन्छ- दसैँ मनाएर काठमाडौँ फर्कनेलाइ सरकारले गर्यो यस्तो आदेश …!! - Buletin Nepal
काठमान्डौ आउदै हुनुहुन्छ- दसैँ मनाएर काठमाडौँ फर्कनेलाइ सरकारले गर्यो यस्तो आदेश …!!
तर जनस्वास्थ्य विद्हरुले भने उपचारको तयारीसँगसँगै समूदायस्तरमा पीसीआर परीक्षणलाई व्यापक बनाउनुपर्ने बताएका छन् । दसैँ सकिएसँगै यतिवेला देशका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौं उपत्यका आउनेहरुको भिड बढेको छ । उपत्यका त्यसैपनि कोभिड संक्रमणको उच्च दर रहेको ठाउँ हो ।
प्रकाशित मिति १३ कार्तिक २०७७, बिहीबार १३:३०